Iyo inonakidza Beagle Basset Hound inosanganisa yakanaka imbwa yemhuri? - Inobereka
Iyo inonakidza Beagle Basset Hound inosanganisa yakanaka imbwa yemhuri?
Sezvaungangofungidzira, ichi chakayambuka musanganiswa pakati peBeagle neBasset Hound. Saka zvinorevei izvozvo?
Inozivikanwa se Bagle Hound , imbwa idzi dzakanaka kwazvo, zvine hunhu, hwakavimbika hunhu hwakagadzirirwa mhuri.
Kana iwe uchida kuziva kana ichi chakangwara, imbwa isina njere yakakodzera mhuri yako, saka ramba uchiverenga. Tichakuudza zvese zvaunoda kuti uzive.
Iyo Bhegi Hound inouya kupi?
Chii chinonzi Beagle Basset Hound musanganiswa inoita senge?
Basset Hound Beagle inosanganiswa ine hunhu hwauchada
Kurera uye kugara neBeagle Basset Hound musanganiswa
Chii chaunofanira kuziva nezve yako Bagle Hound hutano
Unoda kutora kana kutenga beagle basset hound puppy?
Mutongo: Izvo zvese zvinodzikira kune Pros & Cons yeBeagle Basset Hound musanganiswa
Kuwedzera Kuverenga: Beagle inosanganiswa
Kunze kwekuve nezita remadunhurirwa rinoyevedza, isu takakwanisa kukuudza imwe yehunhu hunoshamisa hweBeagle Basset Hound.
Vanoratidzika kunge vanobatanidza ese akanakisa hunhu hwevabereki vavo maberekero. Ngatisvikei pakuvaziva zvirinani kuti tione zvimwe izvo iyo Bagle Hound ichagara nhaka maererano nechitarisiko uye hunhu.
Sangana neBeagle: YeBritish classic
Sangana naKendra, iye ane hushamwari Beagle imbwa
Iyo Beagle inonhuwirira iri pakati nepakati iyo inogona kunge yakagadziriswa muEngland. Ivo vaikosheswa se canine shamwari yevavhimi , kunyangwe dai vaive vasina bhiza.
Zvisinei, zvinofungidzirwa kuti dzinza ravo rinodzokera kunguva dzevaRoma.
Dzimwe imbwa dzekuvhima, senge foxhound uye Zvipingamupinyi , inoda bhiza kunovhima mhuka yakabudirira, asi Beagles inogona kushandiswa nechero ani, kunyangwe dai vasina huwandu.
Vane mhino inozivikanwa pasi rese yekutevera mhuka uye izwi remifananidzo kuti iwe unogona kunhonga kubva muboka.
Beagles dzakazivikanwa neAmerican Kennel Club (AKC) muna 1885, uye vakazozivikanwa muUS mushure meizvozvo.
Nhasi, ivo vari imwe yemhando dzakakurumbira , inowirirana pamakumi gumi emhando dzinosvika mazana maviri.
Idzi imbwa dzine hushamwari, dzinoda kuziva, dzinonakidza, uye dzakatendeka zvachose. Ivo vanowanzo kureruka uye vanofara kuenda pamwe nechero chaunoda uye vari kugona mumapaketi, kungave sewavo vekumba kana avo vaunoshanda navo mumunda.
Iyo inonakidza Basset Hound
Iyo simbe asi inonakidza Basset Hound imbwa
Basset Hound chitarisiko sembwa izere-hukuru pamusoro pegadziriro yemakumbo mapfupi.
Vanouya nemavara akafanana neBeagle, kusanganisira dema uye chena, shava uye chena, nhema nhema uye chena, ndimu uye chena, kana shava, nhema uye chena.
Kubva kuFrance neBelgium, imbwa idzi dziri vakafudzwa kuvhima tsuro nenondo kuitira kuti varidzi vevanhu vavatevere netsoka, zvakare zvakanyanya seBeche.
Ivo vanoonekwa seimwe yeakanakisa kunhuhwirira mune dzose imbwa, yechipiri kune iyo Bloodhound .
Iyo Basset Hound ine hunhu hwakadzikama uye hunofadza , asi kana vachinge vawana hwema hwechimwe chinhu chinonakidza, vanobva vaomesa musoro uye vakanyanya, vaine kuhukura kukuru .
Basset Hound anozivikanwawo, asi kwete zvakanyanya seBeagle. Ivo vanowanzo tarisa kumwe kwakatenderedza makumi mana kubva makumi maviri emhando dzakachena, sekureva kweAKC.
Imbwa dzekugadzira seBagle Hound haigone kunyoreswa neAKC, asi mamwe makirabhu ekuberekesa anozviziva.
Izvo zvinosanganisira Imbwa Registry yeAmerica, Inc. (DRA), International Dhizaini Canine Registry (IDCR), American Canine Hybrid Club (ACHC), Designer Breed Registry (DBR), uye Dhizaina Mbwa Kennel Club (DDKC).
Kazhinji, vane miviri yakareba zvine mwero ine musuru, compact compact . Ivo vane hombe, akaenzana-akafanana misoro uye zvakare akaenzana mativi.
Maziso avo ebrown akaita seBasset Hound, iyo yakatenderera uye yakati rebei, pamwe nenzeve hombe dzakarembera pasi.
Mazhinji ane tsoka dzakadai seBasset Hound, asi zvinoenderana nekuti rudzi urwu rwakavhenganiswa ringave kana kuti ringave risina paws inobuda kunze.
Kusiyana nemamwe mazambuko, iyo Beagle Basset Hound musanganiswa haina kuberekwa kwenguva yakareba kuti igadzire muyero.
Mazhinji ndiwo muchinjikwa pakati peBeagle neBasset hound, pane kusanganisa Bagle Hound neBagle Hound.
Zvinoreva kuti pane kwete kutaura kuti vachataridzika sei kusvikira iwe wavaona ivo pachavo.
Ivo vanogona kugara nhaka yehunhu hwakawanda kubva kuvabereki vavo, saka vanogona kuve vakaita seBasset muhunhu vachitaridzika seBagle, kana pamwe neimwe nzira yakatenderedza.
Iyi vhidhiyo yeMango inokupa iwe zano rekuti Beagle Basset Hound musanganiswa ingaite senge:
Yakakura sei iyo Beagle Basset Hound musanganiswa inowana?
Bagel Hound ane hurefu hwe 12 kusvika 17 inches (30 kusvika 45 cm) uye kuyera kutenderera Makirogiramu makumi matatu kusvika makumi matanhatu (14 kusvika 27 kg).
Kunge imbwa diki- kusvika pakati nepakati, iyo Beagle Basset Hound musanganiswa inokwana mufurati uye inogona kuenderana nemamiriro ezvinhu ehupenyu ihwohwo. Zvakadaro, iwe unofanirwa kufunga nezvesimba rayo remagetsi.
Tinokurudzira iyi yakasanganiswa ku imba ine yakakura-kupfuura-avhareji yadhiyadhi yakakomberedzwa .
Iyo jasi uye mavara eiyo Bagle Hound
Beagle Basset Hound musanganiswa ane jasi izvo pfupi kana pakati pakureba , asi vachave zvechokwadi kumeso uye zvakapfava kubata .
Kufanana nevabereki vayo, ivo vachatamba mutambo wacho mavara echinyakare ekuvhima kubvira ndimu kana yero, orenji, chena, shava, nhema, uye tricolor.
Tarisira makwapa, zvigamba, pamwe nekumaka kwakasiyana pamuviri wayo.
Kupindura mubvunzo mukuru wechinyorwa, Bagle Hound ndeimwe yemakanakisa emhuri zvipfuyo ! Vanoda kutamba nevana, uye vakavimbika zvisingaite.
Kana iwe uchida imbwa ine rudo iyo inofara nekungova newe, saka kutsvaga kwako kweiyo canine shamwari kwapera.
Asi nekuda kwavo hunhu uye hunhu hunhu , iva nechokwadi chekuvadzidzisa kutamba zvakanaka. Izvi zvinoreva kunonoka kuvasuma kuvana uye zvimwe zvipfuyo, uye kuvapa mubairo wekudzikama uye vane hunhu.
Dzidzisa vana vako nzira yekuremekedza imbwa uye chenjera kana chipfuwo chako chiri pedyo nemhuka diki.
Kungofanana nevana, rudzi urwu rwakavhengana runofarira kupinda mudambudziko uye dzimwe nguva rinogona kufuratira kana kusateerera vanhu vavo.
Chimwe chinhu chekutarisa ndechekuti imbwa idzi vanogona kutora nhaka yekuvhima kwevabereki vavo uye bvisa mushure mekunhuhwirira.
Tarisira chero kuedza kudana wako fur fur buddy back kuti afuratirwe kana awana kana kunhuwidza chimwe chinhu chinonakidza. Zviri nani kushandisa imwe nguva uchiita rangarira kudzidziswa neBasset Beagle Hound yako musanganiswa.
Beagles uye Basset Hound zvakasiyana zvakanyanya kana zvasvika pamasimba emagetsi. Ivo vanoita musanganiswa unonakidza, asi zvinogona zvakare kuve zvinonetsa.
Uku kuyambuka kwakasungirwa vane hunhu hwenzwi hwakaenzana hwakafanana hunozivikanwa nevabereki vahwo . Basset Hound inowanzo chema kana bay iyo inogona kufamba nzendo refu.
Kune maBeagles, vamwe vanofungidzira kuti zita ravo rinobva pazwi rechiFrench 'kunyengera,' iro rinoshandurwa zvakasununguka se 'huro yakashama.'
Iwe uchaona izvi kana yako Bagle Hound inonzwa kugumbuka, sekunge kusurukirwa nekusiiwa uri wega kwenguva refu.
Pakazara, ivo vari akarara kumashure uye akangwara akangwara asi akaomesa musoro . Saka pooch yako ichave yakazvimiririra streak - yakajairwa mhando ine hungwaru asi imbwa dzakashata.
Kukunda nyaya idzi, iyo Beagle Basset Hound musanganiswa inoda muridzi ane ruzivo kudzidzisa nekushamwaridzana navo nekukurumidza sezvazvinogona.
Vanogona kunge vakaomarara kudzidzisa kupfuura mamwe marudzi, asi vanofarira kufadza varidzi vavo. Iishandise pamwe chete nekuenderana uye kushivirira, uye kumukurudzira nayo anobata uye kurumbidza.
Kubva rudzi urwu ndewe mukwikwidzi wekudzidzira hunhu , iwe unogona zvakare kunyoresa ivo mukirasi yekuteerera.
Kunyangwe uine nzira ipi yaunosarudza, kuenderana kunokosha. Simbisa iwe semutungamiri, uye zvese zvichave nyore kwazvo mune ramangwana.
Imwe yezvinonyanya kunetsa pakusarudza rudzi rwembwa ndeyekuti iyo fido ichabudirira kwaunogara. Iyo Beagle & Basset Hound muchinjikwa inogona kuchinjika kune yakawanda mamiriro ehupenyu, asi ivo vanoita zvakanyanya munzvimbo ine mwero uye inodziya.
Kana iwe uri munzvimbo iyo kwainogona kupisa chaizvo kana kutonhora zvakanyanya, tsvaga imwe canine.
Bagle Hound anoshanda zvakadii?
Basset Hound-Beagle musanganiswa ane zvine mwero kusvika pakakwirira masimba emagetsi , uye Maminitsi makumi matatu kusvika makumi matanhatu ekurovedza muviri zuva nezuva zvakakwana kuzvichengeta zvine chimiro.
Mwana wako anogona kupisa rimwe simba nekumurega achitenderera kutenderera yadhi yako obva aburitsa nzvimbo, achitsvaga makonzo nedzimwe mhuka.
Iwe ungangoda kugadzira mutambo wekukwevera hwema hwavanofarira vakatenderedza yakakomberedzwa nzvimbo uye wozoita kuti ivo vatevedze hwema kuti vawane kwavo kurapwa kana munhu.
Edza kudhonza hembe yako pamusoro peuswa uye nekukurudzira imbwa yako kuti ikuwane.
Iyi vhidhiyo muenzaniso wekuti iwe ungaite sei hwema mutambo weako Beagle Basset Hound musanganiswa newaanofarira imbwa yekudyira :
Kunze kwekutora, iyi inzira huru yekumutsa imbwa iyi yekuvhima kwechisikirwo uye hwema hwekunhuwa pasina kushandisa zana.
Kune zvakare kukwira uye kumhanya, asi ramba uchifunga kuti Bagle Hound ane mapfupi makumbo . Ive nekuchengera kuti usanyanya kushinha chipfuwo chako, uye izvo zviitiko zvakakodzera .
Idzi imbwa hadzigoni kushambira zviri nyore, kukwira pamusoro pematombo marefu, kana kumhanya madaro marefu.
Iwe unofanirwa kunetseka nezve iyo Beagle Basset Hound musanganiswa wekuteura?
Chimwe chezvinhu zvakanakisa nezverudzi urwu rwakasanganiswa ndechekuti ivo imbwa dzekuchengetedza dzakaderera . Vanogona kunge vasina hypoallergenic, asi ivo vari yakaderera kusvika pamwero mashedhedhi . Saka kushambidzika kunofanirwa kuve nyore nyore.
Nekuti ivo vanofarira kushandisa nguva panze, vachikwesha makushe avo kamwe kana katatu pasvondo vachishandisa bhurasho nyoro inofanirwa kubvisa bvudzi rakasununguka. Vamwe vanoshandisa de-kudurura chishandiso , asi izvo zvichave kwauri.
Ita cheki yevhiki nevhiki kune chero zvikwekwe izvo pooch yako ingadai yakanhonga paakanga ari panze.
Mabhati anofanirwa kupihwa chete kana yako Bagle Hound ikasviba zvakanyanya, kana kamwe chete pavhiki nhanhatu, kudzivirira kudzora mafuta ayo echisikigo.
Shandisa shampoo nyoro izvo zvinobatsirawo kurwisa hwema hwakasimba, hunogona kugarwa nhaka kubva kumubereki weBasset.
Bata neaya makanda eganda nekuisa yakakosha chizoro kana a bharisamu yemakwenzi . Izvo zvinobatsira kuvachengeta vakachena uye vasina nyaya.
Chimwe chekushambadzira vhiki nevhiki kutarisa uye kuchenesa nzeve dzako dzeBeagle-Basset musanganiswa.
Shandisa kuchenesa mhando kuchengetedza tsvina kubva kuunganidze, wobva waita chokwadi kuti dzakaoma kudzivirira hunyoro kubva mukugadzika, izvo zvinotungamira kuzvirwere.
Mazino ekutsvaira anogona kuitwawo vhiki nevhiki kana iwe usingakwanise kuzviitira imbwa yako kaviri kana katatu pasvondo.
Iwe unogona kubata zvipikiri kuzvicheka iwe kana iwe ukavaona ivo vachidzvanya pasi, kana kuunza yako fur buddy kune ivo vanogadzira.
Beagle neBasset hound inosanganisa RUDO chikafu, uye ivo inogona kuwedzera uremu nekukurumidza . Izvi zvinoreva kuti musanganiswa wavo haufanire kupihwa mahara.
Pane kudaro, dzora kudya kwavo kwekudya zvine hungwaru uchishandisa chaiyo feeder uye namatira kune yekudyidzana purogiramu.
Basset-Beagle michinjikwa inoda 1.5 kusvika 3 makapu eakaomeswa kabble pazuva , kupatsanurwa pakati pezvokudya zviviri. Zvichienderana nehuremu hwavo, zera, uye metabolism, ivo vanowanzoda kutenderedza 900 kusvika 1,500 macalorie zuva nezuva .
Sarudza mhando yepamusoro yakaoma imbwa chikafu izvo zvine mapuroteni mazhinji asi mashoma mumafuta kudzivirira kuwana mamwe mapaundi.
Zvimwe kunze kweizvozvo, unganidza simba rako kuti usape chero tafura yezvimedu uye zvakawanda zvakawandisa kana yako Bagle Hound ikatarisa kwauri nekuchema.
Kana iwe ukavachengeta uye ukaona huremu hwavo, imbwa idzi dzinogona kuve ne hupenyu hwepakati pemakore gumi kusvika gumi nemashanu .
Kunge imbwa dzakagadzira, Beagle Basset Hound musanganiswa kazhinji ane hutano , asi vamwe vanogona kutambura nenyaya dzehutano, zvinoenderana nedzinza ravo.
Chenjerera izvi zvinowanzoitika zvinetso zvehutano:
Pfari, iyo inokonzeresa kudzokorodza. Kunyangwe ichigona kurapwa, zvinogona kudhura kubata nemushonga uye kuongororwa kwese.
Von Willebrand chirwere
Dambudziko reropa senge Thrombopathia
Dambudziko rekuseri, iro rakajairika mune yakaderera, imbwa refu
Iwe unofanirwa zvakare kutarisa matambudziko eziso senge cataract, corneal opacities, glaucoma, distichiasis, Cherry Eye, kana inofambira mberi retinal atrophy. Idzi imbwa dzinowanzo tenderera ku entropion kana ectropion eyelids.
Iwe unofanirwa kuziva kuti kutsvaga Basset Hound Beagle musanganiswa wembwanana wekubereka hakusi nyore kuuya nekuti ivo rudzi rutsva rwakasanganiswa . Uye kana ukadaro, tarisira kuti mutengo uve kutenderedza $ 500 kusvika $ 2,000 .
Izvo hazvisanganise avhareji yegore isiri-yekurapa mari inogona kutenga kumwe kunhu pakati pe $ 500 kusvika $ 600, uye zvegore zvokurapa mari, iri kutenderera $ 475 kusvika $ 600.
Kunyangwe paine vasina varimi vazhinji vanoburitsa iyi yemasanganiswa, unogona kusangana nemarara marara nguva nenguva, iko kuri pakati nepakati 6 kusvika ku8 vana .
Unofanira here kuwana murume kana mukadzi Bagle Hound
Hutongi hunogona kusiyana zvakanyanya kubva imbwa kuenda kune imbwa, zvakanyanya nekuda kwenzvimbo yavo uye kurera.
Mukadzi Beagle-Basset musanganiswa ane mashoma madiki misiyano kubva kumukadzi, asi ivo vanonyanya kuonekera pavanenge vachikura, kusanganisira kunyangwe varaswa kana vasina neutered.
Basset Hound anonzi ndeimwe yemhando uko gadzi inoita mutsauko mudiki muhunhu. Zvisinei, Beagle's genetics inogona kuzunungusa zvinhu zvishoma.
Varume Bagle Hound anowanzo kuve akati kurei uye anorema kupfuura vakadzi. Ivo zvakare vanotamba uye vanoda kuve pakati pekutarisisa. Vakadzi vanowanzo kuve vanogutsikana uye vanozvimiririra mukuita kwavo vega zvinhu.
Beagle Basset Hound vafudzi & kununura
Idzi imbwa dziri kutengeswa pasirese, kubva kuCalifornia neTexas kuenda kuPennsylvania uye pamusoro padziva kuenda kuUK.
Hazvina mhosva kuti unovawana kupi, tsvaga vafudzi vakanaka vanokutendera kuti usangane nevabereki vepachena uye ona avo eropa zvinyorwa, zvitupa zvehutano, nezvimwe.
Chero chero mureri anoita kunge asiri kuuya mureza mutsvuku, kusanganisira avo vanotengesa akawanda marudzi. Ivo kunyanya vane hanya nezvekuita mari pane kuchengeta hutano hwembwa.
Kuwana muberekesi akanaka kwakakosha. Iwe ungangozopedzisira wabhadhara yakawanda munguva refu kana usinga.
Sezvo pasina variko vatengesi vembwanana maBagle Hound, kutorwa ichave yako inotevera sarudzo. Iwe unogona kutarisa aya masangano ekudzikinura ayo anowana Basset Hound neBeagles, pamwe chete nemisanganiswa yavo:
Basset uye Beagle Kununura kweiyo Heartland (Vakomana Guta, NE)
Tri-State Basset Hound Kununura (Yakadzika yemvura, NJ)
Belly Rubs Basset Kununura (Brentwood, TN)
Beagles uye Buddies Kununura (Apple Valley, CA)
Tampa Bay Beagle Kununura (Tampa, FL)
Bagle hound inogadzira zvipfuwo zvakaisvonaka, asi iwe unofanirwa kuve neshuwa kuti uri munhu chaiye kune idzi dzakavimbika, goofy, dzakangwara imbwa.
Ivo akakodzera kumhuri, vakuru, uye vanoda imbwa vachitsvaga a zvine mwero inoshanda uye yakaderera-yekuchengetedza canine shamwari .
Ehezve, ndiani asingade iyo akangwara chipfuwo ? Asi izvo zvinorevawo kuti ivo kuda kuomesa musoro .
Kana iwe uri kugara mune diki imba kana furati, Basset & Beagle musanganiswa ndizvo zvine ruzha uye zvinotamba , saka ungangoda kusarudza imwe hybrid.
Unogona here kubata neBeagle Basset Hound musanganiswa? Goverana zvaunofunga nesu nekupindura pazasi.
Beagle Lab musanganiswa (AKA Beagador)
Corgi Beagle musanganiswa (AKA Beagi)
Boxer Beagle musanganiswa (AKA Boggle)
30 Yakanakisa Hypoallergenic Imbwa Kune Vanhu Vane Allergies
fungidzira huremu hwembwa kana yakura yakazara karukureta
black lab uye rottweiler musanganiswa
German shepherd mazita evasikana
bhachi uye bhurugwa poodle cut
mazita embwa dzechihuahua